Toddobaadkan waxay u muuqataa in xitaa Shiinaha, oo aan joojin kala shaandheynta wararka / xanta la xiriirta iPhone 7, ay aadeen fasax, maaddaama aynaan si adag u helin warar la xiriira nooca soo socda ee Apple ay suuqa ka bilaabi doonto toddobaadyo yar gudahood. . Maxaa dhacaya haddii aan helnay waxaa jira warar badan oo laxiriira Apple Music, Spotify iyo kuwa gaarka ah ee caanka ah Taasi waxay u muuqataa inay dhamaatay, uguyaraan dhamaan fanaaniinta ku hoos jira astaanta Universal Music waxaana cadeyn u ah tan waxaan heysanaa in albumkii ugu dambeeyay ee Lady Gaga uusan wali gaarin Apple Music qof kale kahor, sidii sanadihii hore.
1 Apple Music iyo tartanka
2 iPhone 7 iyo wararkiisa xanta ah
3 macruufka 9.3.x iyo JAILBREAK
Apple Music iyo tartanka
Spotify ayaa beenisay inay si xun ula dhaqmayso fanaaniinta bixiya waxyaabaha gaarka u ah Apple Music
Hawlwadeenka Australia Telstra waxay u soo bandhigi doontaa xog moobiil aan xadidnayn dhammaan isticmaalayaasha Apple Music.
Hawl wadeenka, kiiskan Jarmal, Deutsche Telecom waxay bixisaa lix bilood oo bilaash ah Apple Music dhammaan macaamiisha cusub.
Bandhig Faneedka Apple Music wuxuu horey u leeyahay taariikho iyo boodhadhka fanaaniinta martida ah. Daabacaadda sanadkan waa tii tobnaad waxaana mar kale lagu qaban doonaa London Roundhouse.
Dagaalkii ka dhex bilaabmay Apple Music iyo Spotify bishii Juun ee la soo dhaafay ayaa sii socda markan shirkada Sweden waxay dooneysaa inay yareyso lacagta ay siiso shirkadaha.
iPhone 7 iyo wararkiisa xanta ah
Saxeex Spigen ayaa hadda soo saartay khad cusub oo kiisaska ah ee soo socda ee iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus, oo ku saleysan wararka xanta ah ee ilaa iyo hadda la daabacay.
Caanka " IPhone 7 Plus laba kamaradood waxaa soo saari doona shirkadda Primax Electronics.
IPhone 7 ayaa ugu dambeyn sii deyn kara kamaradiisa xasilinta indhaha.
macruufka 9.3.x iyo JAILBREAK
Toddobaadkan iyo ku dhowaad bil kadib markii la bilaabay Apple ayaa joojisay saxiixa macruufka 9.3.3, noocii ugu dambeeyay ee la jaanqaadi kara JAILBREAK ay Shiinaha ka soo bilaabeen Pangu.
Luca Todesco maahan isticmaalaha kaliya ee laxiriira JAILBREAK iyo fursadaha ay kuleedahay noocyada cusub ee iOS. Min Zheng wuxuu soo geliyay fiidiyoow YouTube-ka muuqaal aan ka arki karno sida aad ugu guuleysatay inaad ku xirto iPhone-ka iOS 9.3.4
Isbuucaan Apple waxay si deg deg ah u sii deysay oo ay u shaqeyneysaa iOS 9.3.5 cusbooneysi cusub oo xallinaya dhibaatada amniga ee halista ah ee la ogaaday, oo ah eber maalin u nugul, kaas oo iPhone-keena uu ku dhici karo spyware kaas oo kormeeri lahaa wax kasta oo aan ku sameyno iPhone, iPad ama iPod taabashada.
Toddobaadkan Apple ayaa sidoo kale soo bandhigtay 10aad beta ee iOS XNUMX
Apple waxay ka codsatay Unicode in lagu daro 10 emojis cusub: cirbixiyeen, dabdamis, garsooraha booliska, rinjiye ...
Kama tagi karno adigoon xusin casharka saaxiibkeen Miguel kaas oo uu ku tusayo sida aan u awoodno ka daawo kanaallada adduunka oo dhan bilaash iyada oo loo marayo iPhone, iPad ama iPod Touch iyada oo loo marayo codsiga Wiseplay